Indlela Yokufumana UThixo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“UThixo asinakumazi.”—UPhilo waseAlexandria, intanda-bulumko yenkulungwane yokuqala.
“[UThixo] akakude kuye ngamnye wethu.”—USawule waseTarso, ethetha neentanda-bulumko eAthene ngenkulungwane yokuqala.
NJENGOKO ufunda la mazwi, ngawaphi achaza imbono yakho? Abaninzi bafumanisa ukuba amazwi kaSawule waseTarso, okwabizwa ngokuba ngumpostile uPawulos, ayathuthuzela kwaye abangela umdla. (IZenzo 17:26, 27) IBhayibhile inazo nezinye iziqinisekiso ezifana naso. Ngokomzekelo, uYesu wenza umthandazo onesiqinisekiso sokuba abafundi bakhe banako ukumazi uThixo yaye unokubasikelela.—Yohane 17:3.
Noko ke, iintanda-bulumko ezifana noPhilo zibona ngenye indlela. Zithi asinakuze simazi uThixo kuba asinakuze simqonde ngokupheleleyo. Sis’ eyiphi komkhulu?
Kambe ke, iBhayibhile ayifihli makhuba, iyavuma ukuba zikho izinto ekunzima ngabantu ukuziqonda ngoThixo. Ngokomzekelo, ubude bexesha lobukho boMdali, ubukrelekrele bakhe, ubunzulu bobulumko bakhe abunakulinganiswa okanye abunakuqondwa. Ingqondo yomntu ayinakuze iziqonde ezo zinto. Ezi mpawu zakhe azisenzi singamazi. Kunoko, ukucamngca ngazo kunokusinceda ‘sisondele kuThixo.’ (Yakobi 4:8) Makhe sihle amahlongwane imizekelo embalwa yezi zinto zingaqondakaliyo. Siza kuhlola iimpawu zikaThixo esinokuziqonda ngokwenene.
Ziziphi Izinto Ezingaqondakaliyo NgoThixo?
UKUPHILA KUKATHIXO NGONAPHAKADE: IBhayibhile ifundisa ukuba uThixo ebekho “ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo.” (INdumiso 90:2) Ngamanye amazwi, uThixo akanasiqalo engenasiphelo. Umntu ‘akanakukwazi ukugocagoca inani leminyaka yakhe.’—Yobhi 36:26.
Indlela oncedakala ngayo: UThixo ukuthembisa ubomi obungunaphakade ukuba uye wamazi. (Yohane 17:3) Besinokuthenjwa njani eso sithembiso ukuba uThixo ebengaphili ngonaphakade? ‘NguKumkani kanaphakade’ kuphela onokusizalisekisa eso sithembiso.—1 Timoti 1:17.
INGQONDO KATHIXO: IBhayibhile ifundisa ukuba ‘ukuqonda kukaThixo akunakugocagocwa’ kuba iingcinga zakhe ziphakamile kunezethu. (Isaya 40:28; 55:9) Yiloo nto ibuza lo mbuzo buciko: “Ngubani na ozaziyo iingcamango zeNkosi: ingubani na onako ukuyicebisa?”—1 Korinte 2:16, IBhayibhile yesiXhosa ka-1996.
Indlela oncedakala ngayo: UThixo uyakwazi ukuphulaphula imithandazo yezigidi zabantu. . (INdumiso 65:2) Uyakwazi ukubona kwanoongqatyana abawela phantsi. Ngaba ingqondo kaThixo ingaze idinwe, aze angakwazi ukukubona okanye ukuphendula imithandazo yakho? Akunjalo, kuba ingqondo yakhe ayidinwa. Into ebaluleke nangakumbi kukuba wena ‘uxabiseke ngaphezu koongqatyana abaninzi.’—Mateyu 10:29, 31.
IINDLELA ZIKATHIXO: IBhayibhile ifundisa ukuba uluntu ‘alunakuze luwufumane umsebenzi uThixo oyinyaniso awenzileyo ukususela ekuqaleni kuse ekupheleni.’ (INtshumayeli 3:11) Ngenxa yoko, asinakuze sazi yonk’ into ngoThixo. Ubulumko beendlela zikaThixo ‘abulandeki.’ (Roma 11:33) Kodwa ke, uThixo ukulungele ukutyhila iindlela zakhe kwabo bamkholisayo.—Amosi 3:7.
Ubude bexesha lobukho boMdali, ubukrelekrele bakhe, ubunzulu bobulumko bakhe abunakulinganiswa okanye abunakuqondwa
Indlela oncedakala ngayo: Ukuba ufunda iBhayibhile, uyakusoloko ufunda izinto ezintsha ngoThixo nangeendlela zakhe. Loo nto ithetha ukuba siya kusoloko sisondela kuBawo wethu wasezulwini ngonaphakade.
Ukungaziqondi ngokupheleleyo iimpawu zobuntu bukaThixo akuthethi ukuba asinakuze simazi kwaphela. IBhayibhile inentabalala yenkcazelo enokusinceda simazi ngakumbi uThixo. Khawucinge ngale mizekelo:
IGAMA LIKATHIXO: IBhayibhile isifundisa ukuba uThixo wazithiya igama. Uthi: “NdinguYehova. Lilo elo igama lam.” Igama likaThixo livela izihlandlo ezimalunga ne-7 000 eBhayibhileni, ibe lelona gama livela kaninzi.—Isaya 42:8.
Indlela oncedakala ngayo: UYesu wathi kumthandazo othi bawo wethu osemazulwini: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.” (Mateyu 6:9) Wena, awungethandi ukusebenzisa igama likaThixo kweyakho imithandazo? UYehova ukulungele ukusindisa nabani na olihlonelayo igama lakhe.—Roma 10:13.
INDAWO AHLALA KUYO: IBhayibhile ifundisa ukuba kukho “imimandla” emibini—ummandla womoya ekuhlala kuwo izidalwa ezinemizimba yomoya nendalo ebonakalayo equka umhlaba nendalo yonke. (Yohane 8:23; 1 Korinte 15:44) EBhayibhileni igama elithi “amazulu” lidla ngokubhekisela kummandla womoya. ‘Uhlala kuloo ndawo’ ke uMdali.—1 Kumkani 8:43.
Indlela oncedakala ngayo: Uba nembono ecacileyo ngoThixo. UMdali akangomandla akho kuyo yonke indawo nakwizinto zonke. UYehova nguMntu wokwenene onendawo ahlala kuyo. Sekunjalo, “Akukho sidalwa singabonakaliyo emehlweni akhe.”—Hebhere 4:13.
UBUNTU BUKATHIXO: IBhayibhile ifundisa ukuba uYehova uneempawu ezintle. “UThixo uluthando.” (1 Yohane 4:8) Akaze axoke. (Tito 1:2) Akanamkhethe, unenceba nemfesane akakhawulezi ukucaphuka. (Eksodus 34:6; IZenzo 10:34) Enye into enokubamangalisa abaninzi kukuba, uMdali unqwenela “ukusondelelana” nabo bamhlonelayo.—INdumiso 25:14.
Indlela oncedakala ngayo: Unokuba ngumhlobo kaYehova. (Yakobi 2:23) Ngokuya ubazi ubuntu bukaYehova, uza kuziqonda lula iingxelo zeBhayibhile.
IBhayibhile isizobela umfanekiso ocacileyo ngoYehova uThixo. Endaweni yokungaqondakali, uMdali ufuna umazi. ILizwi lakhe iBhayibhile lithembisa oku: “Ukuba uthe wamfuna, uya kumfumana.” (1 Kronike 28:9) Kutheni ungazami ukumazi uThixo ngokufunda nokucamngca ngeengxelo eziseBhayibhileni? Ukuba wenjenjalo, iBhayibhile ithembisa ukuba uThixo ‘uya kusondela kuwe.’—Yakobi 4:8.
Ukuba ufunda iBhayibhile, uyakusoloko ufunda izinto ezintsha ngoThixo nangeendlela zakhe
Mhlawumbi uyazibuza, ‘Ekubeni ndingenakuqonda yonke into ngoMdali, ndinokuba nguye njani umhlobo wakhe?’ Cinga ngoku: Ngaba umhlobo osenyongweni kagqirha kufuneka afunde ezonyango? Akunjalo! Umhlobo kagqirha usenokufundela into eyahluke ngokupheleleyo kuleyo. Nakuba kunjalo, bayakwazi ukuba ngabahlobo. Into ebalulekileyo kukuba umhlobo kagqirha uyabazi ubuntu bukagqirha, izinto azithandayo nangazithandiyo. Ngendlela efanayo, unokufunda eBhayibhileni uhlobo lomntu alulo uYehova ibe yiloo nto kanye efunekayo ukuze ube ngumhlobo wakhe.
Kunokuba iBhayibhile isizobele umzobo olumfiliba ngoMdali, inenkcazelo esiyifunayo ukuze simazi uThixo. Ngaba ungathanda ukwazi okungakumbi ngoYehova uThixo? AmaNgqina kaYehova afundisa abantu iBhayibhile ngesisa. Siyakumema ukuba uqhagamshelane neNgqina elikummandla wakho okanye ungene kwiwebhsayithi yethu, u-www.jw.org/xh.